लेजर बाल हटाउने - सधैंभरि चिल्लो छाला
हरेक स्त्रीको सपना - बाल को आवधिक हटाउने लिएर बिना, सधैं पूर्ण चिल्लो शरीर छ। कहिलेकाहीं तपाईं इच्छित प्रभाव हासिल गर्न धेरै समय खर्च गर्न छ। यस मदत गर्न सक्छ लेजर बाल हटाउने। यो प्रक्रिया अनावश्यक हटाउने सबै अन्य विधिहरू बारे भूल गर्न अनुमति दिन्छ वनस्पति। यो आफ्नो अनुहार वा शरीरको कुनै पनि अन्य भाग मा बाल को छुटकारा प्राप्त गर्न surest तरिका हो। निस्सन्देह, इच्छित प्रभाव प्रक्रिया धेरै पटक दोहोर्याउन हुनेछ हासिल गर्न, तर अन्त परिणाम यो लायक छ।
प्रक्रिया नै निम्न छ: कुनै पनि हानि कारण बिना बाल विकास, छाला मार्फत को स्थान उद्देश्य लेजर, कपाल follicle असर र यसलाई नाश। यस्तो बाल अब बढ्नेछ। तर सक्रिय वृद्धि चरण मात्र follicle लेजर ज्योति बीम अवशोषित गर्न सक्छन्। यो र बारम्बार प्रक्रिया दोहोर्याउन सम्बन्धित आवश्यकता छ। प्रत्येक व्यक्ति को लागि सना भ्रमणमा वा विशेष अस्पताल संख्या व्यक्तिगत, यो तिनीहरूलाई हटाउन योजना छ जो संग शरीर मा बाल को राशि, आधारमा। साथ लेजर धेरै hairs, कार्य लगभग 1 वर्ग यसको अर्धव्यास असर गर्छ। सेमी।
लेजर बाल हटाउने सत्र एउटा सरल तयारी आवश्यक छ। यसो गर्न, तपाईं दिन को एक जोडी प्रक्रिया अघि दाढी पर्छ, केश फिर्ता 1-2 मिमी बढ्न सकेन। साथै, तपाईँले जलाए प्राप्त गर्न सक्छन् किनभने sunbathe छैन। आवश्यक छ भने, शरीर धेरै संवेदनशील क्षेत्रमा एउटा शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि क्रीम लागू गर्न।
इन्कार को लायक केही दिन भित्रमा कपाल हटाउने पछि सना, धूपघडी, विशेष गरी रक्सी सामाग्री, कस्मेटिक्स प्रयोग कम गर्न। आफ्नो डाक्टर विशेष उपकरण प्रयोग गर्न सिफारिस हुन सक्छ।
छाला थोरै जलन, राता, वा कुनै पनि सानातिना बल्न देखिन्छ भने, तिनीहरूले पारित धेरै चाँडै हुनेछ।
लेजर बाल हटाउने कपाल केही contraindications छ:
- कुनै पनि aggravated छाला रोग;
- फुलेको नसाहरु;
- संक्रामक रोगहरु।
साथै, यसलाई 18 वर्ष यस्तो प्रक्रिया अप पूरा गर्न निषेध गरिएको छ।
लेजर घरमा कपाल हटाउने पनि सम्भव छ। यसो गर्न, तपाईं एक विशेषता भण्डारमा एक विशेष उपकरण किन्न वा अनलाइन अर्डर गर्नुपर्छ। यो सुविधाजनक र सजिलो प्रयोग गर्नुहोस्। आकार मा सौंदर्य सैलून, प्रक्रिया किन अब लाग्न सक्छ भन्दा सानो छ।
एकाइ को कालो कपाल र, गोरो रातो र खैरो, उहाँले केवल सूचना असफल हुन सक्छ राम्रो प्रतिक्रिया किनभने लेजर बाल हटाउने, Brunettes र खैरो-haired महिला लागि थप प्रभावकारी हुन्छ।
शरीरमा अनावश्यक वनस्पति हटाउन यस्तै विधि मात्र होइन महिला तर पनि मानिसहरू बीच धेरै लोकप्रिय छ। अब सबैले प्रश्नको जवाफ सक्षम हुनेछ "लेजर बाल हटाउने छ के?"। बाल बलियो सेक्स थप कडे, साथै, त्यहाँ एक महिलाको शरीर बढी छन् किनभने पुरुष शरीरमा कपाल हटाउने प्रक्रिया थप उपचार आवश्यक हुनेछ।
एक बाल रंग सल्लाह र अभ्यास कसरी चयन गर्न
आफ्नो बाल कसरी सीधा गर्न? - व्यावसायिक सल्लाह
Batiste (सुक्खा स्याम्पु): आवेदन, को खुलासा र समीक्षा को विधि
घर मा lashes कसरी बलियो बनाउन?
पहेंलो भाग कपाल - खाद्य र हेरविचार
अस्पताल "महासागर", भ्लाडिभास्तोक: फोटो, पर्यटकहरु समीक्षा
प्रत्याशा Cosmonauts - शहर को एक सुन्दर क्षेत्र
तर सस मा कलेजो
सुझाव र चाल: russules कसरी खाना पकाउनु
Theophane - महानगरीय Simbirsky: जीवनी र फोटो
साइट र यसको सामग्रीको पृष्ठ कसरी प्रतिलिपि गर्न
यो श्रृंखला "को Arbat को बच्चाहरु": अभिनेता र भूमिकाको, षड्यन्त्र, सारांश
दबाइ 'Gepabene'। समीक्षा, वर्णन, सङ्केत गर्छ